लूका १२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१२ त्यसबीच हजारौंको सङ्‌ख्यामा मानिसहरूको भीड जम्मा भयो, यहाँसम्म कि टेक्ने ठाउँसमेत नपाएर तिनीहरूले एक-अर्काको खुट्टा कुल्चिरहेका थिए। तब येशूले सर्वप्रथम आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनेर आफ्नो कुरा सुरु गर्नुभयो: “फरिसीहरूको खमिर अर्थात्‌ कपटदेखि होसियार रहो।
२ होसियारीपूर्वक छिपाइएको यस्तो कुनै कुरा छैन, जो प्रकट नहोस् अनि यस्तो कुनै गोप्य कुरा छैन, जो थाह नहोस्।
३ त्यसैले तिमीहरू जे अन्धकारमा भन्छौ, त्यो उज्यालोमा सुनिनेछ अनि भित्री कोठाहरूमा जे तिमीहरू खुसुक्क भन्छौ, त्यो घरको धुरीबाट फुकिनेछ।
४ साथै, हे मेरा साथीहरू, म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यस्ताहरूसित नडराओ जसले तिमीहरूको ज्यान लिन सक्छन्‌ तर त्योभन्दा बढ्‌ता अरू केही गर्न सक्दैनन्‌।
५ तर कोसित डराउनुपर्छ म तिमीहरूलाई बताउँछु: उहाँसित डराओ जससित ज्यान लिएपछि गेहेन्नामा* फ्याँक्ने अख्तियार छ। हो, म तिमीहरूलाई भन्छु, उहाँसितै डराओ।
६ के पाँच वटा भँगेरा दुई पैसामा* बिक्दैन र? तैपनि तीमध्ये एउटैलाई पनि परमेश्वरले बिर्सनुहुन्न।
७ तर तिमीहरूको कपालसमेत सबै गनिएका छन्‌। नडराओ, तिमीहरू थुप्रै भँगेराभन्दा बहुमूल्य छौ।
८ “त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले मलाई मानिसहरूसामु स्वीकार्छ, मानिसको छोराले पनि उसलाई परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूसामु स्वीकार्नेछ।
९ तर जसले मलाई मानिसहरूसामु इन्कार गर्छ, उसलाई पनि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूसामु इन्कार गरिनेछ।
१० जसले मानिसको छोराको विरुद्धमा बोल्छ, उसलाई क्षमा दिइनेछ। तर जसले पवित्र शक्तिको निन्दा गर्छ, उसलाई क्षमा दिइनेछैन।
११ तिनीहरूले जनतासामु, सरकारी अधिकृतहरूसामु अनि अख्तियारवालाहरूसामु तिमीहरूलाई उभ्याउँदा आफ्नो बचाउको लागि के भन्ने अथवा कसरी भन्ने भनी चिन्ता नगर,
१२ किनकि तिमीहरूले के भन्नुपर्ने हो, पवित्र शक्तिले तिमीहरूलाई त्यतिखेरै सिकाउनेछ।”
१३ तब भीडबाट एक जनाले उहाँलाई भन्यो: “गुरुज्यू, मेरो दाइलाई हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्न भनिदिनुहोस्।”
१४ उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: “ए मित्र, तिमीहरूको न्याय गर्न वा अंशबण्डा गर्न कसले मलाई नियुक्त गऱ्यो?”
१५ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूको आँखा खुला राख र हर प्रकारको लालचबाट आफूलाई जोगाओ किनभने मानिस जति नै सम्पन्न भए तापनि त्यसले उसलाई जीवन दिंदैन।”
१६ त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो दृष्टान्त बताउनुभयो: “एक जना धनी मानिसको जमिनले राम्रो उब्जनी दियो।
१७ त्यसैले उसले मनमनै भन्न थाल्यो: ‘यत्रो उब्जनी राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब के गर्ने होला?’
१८ उसले भन्यो: ‘म यसो गर्छु: मेरो धनसार भत्काउँछु अनि अझ ठूलो धनसार बनाउँछु र मेरा सबै अनाज र सरसम्पत्ति त्यहीं राख्छु।
१९ अनि आफूलाई भन्नेछु: “तँसित वर्षौंलाई पुग्ने सरसम्पत्ति छ। त्यसैले आरामसित बसेर खा, पि अनि मोज गर्‌।” ’
२० तर परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो: ‘ए बेसमझ, यही रात तिनीहरूलाई तेरो ज्यान* चाहिएको छ। तैंले जम्मा गरेका कुराहरू अब कसको होला?’
२१ जुन मानिसले आफ्नो लागि धनसम्पत्ति थुपार्छ तर परमेश्वरको नजरमा चाहिं धनी हुँदैन, त्यसको हालत यस्तै हुनेछ।”
२२ अनि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “यसकारण म तिमीहरूलाई भन्छु: के खाऔंला कि के पिऔंला भनी आफ्नो विषयमा वा के लगाऔंला भनी आफ्नो शरीरको विषयमा तिमीहरू चिन्ता गर्न छोडिहाल।
२३ किनकि भोजनभन्दा जीवन र लुगाफाटाभन्दा शरीर महत्त्वपूर्ण हो।
२४ राम्ररी हेर, कागहरू न बीउ छर्छन्‌ न कटनी गर्छन्‌ न त भण्डार वा धनसारमै जम्मा गर्छन्‌ तैपनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिमीहरू चराहरूभन्दा धेरै मोलका छैनौ र?
२५ तिमीहरूमध्ये कसले पो चिन्ता गरेर आफ्नो आयु एक हात लम्ब्याउन सक्छौ र?
२६ यदि तिमीहरूले यति सानो कुरा त गर्न सक्दैनौ भने बाँकी अरू कुराहरूको किन चिन्ता गर्छौ?
२७ फूलहरू कसरी बढ्‌छन्‌ राम्ररी हेर, तिनीहरू न परिश्रम गर्छन्‌ न त धागो कात्छन्‌; तर म तिमीहरूलाई भन्छु, सारा वैभवले सुसज्जित सुलेमानसमेत यी फूलहरूमध्ये एउटा जति पनि सिंगारिएका थिएनन्‌।
२८ यदि परमेश्वरले आज देखिने अनि भोलि चुल्होमा फ्यालिने मैदानका बोटबिरुवालाई त पहिराउनुहुन्छ भने हे अल्पविश्वासीहरू हो, उहाँले तिमीहरूलाई झनै कत्ति धेरै पहिराउनुहुन्छ होला!
२९ त्यसैले ‘हामी के खाऔंला?’ कि ‘के पिऔंला?’ कि ‘के लगाऔंला?’ भनेर अचाक्ली चिन्ता गर्न छोडिहाल।
३० किनकि संसारका मानिसहरू यिनै कुराका लागि दौडधूप गर्छन्‌। तर यी कुरा तिमीहरूलाई चाहिन्छ भनेर तिमीहरूका बुबालाई थाह छ।
३१ बरु उहाँको राज्यको निरन्तर खोजी गर अनि यी कुरा तिमीहरूलाई दिइनेछ।
३२ “हे सानो बगाल, नडराओ, किनकि तिमीहरूको बुबाले तिमीहरूलाई राज्य दिन मन्जुर गरिसक्नुभएको छ।
३३ आफूसित भएका कुराहरू बेच र दान देओ। आफ्नो लागि कहिल्यै नफाट्‌ने थैली बनाओ अनि कहिल्यै नसिद्धिने धनसम्पत्ति स्वर्गमा थुपार, जसको छेउछाउमा चोर पुग्दैन अनि जहाँ कीराले पनि खाँदैन।
३४ किनकि जहाँ तिमीहरूको धन हुन्छ, त्यहीं तिमीहरूको मन पनि हुन्छ।
३५ “तिमीहरू कम्मर कसेर बस अनि तिमीहरूको दियो बलिरहोस्।
३६ अनि विवाह-भोजबाट फर्केर मालिकले ढोका ढकढक्याउँदा तुरुन्तै खोल्न सकूँ भनी पर्खिरहेका मानिसहरूजस्तो तिमीहरू होओ।
३७ धन्य हुन्‌ ती दासहरू, जसलाई मालिकले जागा बसिरहेको पाउँछन्‌! म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिनले आफ्नो कम्मर कस्नेछन्‌ र आफ्ना दासहरूलाई खान बसाउनेछन्‌ अनि छेवैमा गएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्‌।
३८ तिनी दोस्रो प्रहरमा* वा तेस्रो प्रहरमै आउँदा पनि तिनीहरूलाई जागै पाउँछन्‌ भने तिनीहरू धन्य हुन्‌!
३९ तर यो कुरा जानिराख, यदि घरमालिकलाई चोर कुन बेला आउने हो, त्यो थाह भएको भए ऊ जागै बस्नेथियो र त्यसलाई आफ्नो घर फोरेर छिर्न दिने थिएन।
४० यसैगरि तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि तिमीहरूले नचिताएको बेला मानिसको छोरा आउँदैछ।”
४१ तब पत्रुसले भने: “प्रभु, तपाईंले यो दृष्टान्त हाम्रो लागि बताउनुभएको हो कि सबैका लागि?”
४२ अनि प्रभुले भन्नुभयो: “वास्तवमा विश्वासी र बुद्धिमान्‌ भण्डारे को हो, जसलाई उसको मालिकले आफ्ना सेवकहरूको दललाई ठीक समयमा र ठीक मात्रामा भोजन दिइरहोस् भनेर तिनीहरूमाथि नियुक्त गर्नेछन्‌?
४३ आनन्दित हो त्यो दास, जसलाई उसको मालिकले फर्केर आउँदा त्यसै गरिरहेको भेट्टाउँछन्‌!
४४ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, तिनले उसलाई आफ्ना सबै सम्पत्तिहरूमाथि नियुक्त गर्नेछन्‌।
४५ तर यदि त्यो दासले ‘मेरो मालिक बियाँलो गर्नुहुन्छ’ भनी मनमनै भन्यो र आफ्ना सँगी दास-दासीहरूलाई पिट्‌न अनि खान, पिउन र मात्तिन थाल्यो भने
४६ त्यस दासको मालिक उसले आशै नगरेको दिनमा र उसलाई थाहै नभएको समयमा आउनेछन्‌। अनि उसलाई अति कठोर दण्ड दिनेछन्‌ र अविश्वासीहरू भएको ठाउँमा फ्याँकिदिनेछन्‌।
४७ अनि जुन दास आफ्नो मालिकको इच्छा बुझेर पनि तयार हुँदैन वा तिनको इच्छाअनुसार गर्दैन, उसलाई धेरै चोटि कोर्रा लगाइनेछ।
४८ तर जुन दासले नबुझेर कोर्रा खान लायकको काम गर्छ, उसलाई थोरै चोटि मात्र कोर्रा लगाइनेछ। हो, जसलाई धेरै दिइएको छ, ऊसित धेरै नै माग गरिनेछ अनि जसलाई धेरै कुरा सुम्पिइएको हुन्छ ऊबाट साबिकभन्दा बढी नै माग गरिनेछ।
४९ “म पृथ्वीमा आगो सल्काउन आएँ। यदि पहिल्यै सल्किसकेको छ भने मलाई अरू के चाहियो र?
५० हो, मैले गर्नुपर्ने एउटा बप्तिस्मा छ र त्यो बप्तिस्मा नगरुन्जेल म अत्यन्तै व्याकुल हुनेछु!
५१ के तिमीहरू म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको हुँ भन्ठान्छौ? त्यसो होइन, म तिमीहरूलाई भन्छु, म त फूट गराउन आएको हुँ।
५२ अब उप्रान्त एउटै घरका पाँच जनाबीच फूट हुनेछ; तीन जनाको विरुद्धमा दुई जना अनि दुई जनाको विरुद्धमा तीन जना उठ्‌नेछन्‌।
५३ बुबाको विरुद्धमा छोरा, छोराको विरुद्धमा बुबा, छोरीको विरुद्धमा आमा, आमाको विरुद्धमा छोरी, बुहारीको विरुद्धमा सासू अनि सासूको विरुद्धमा बुहारी उठ्‌नेछन्‌ र तिनीहरूबीच फूट हुनेछ।”
५४ अनि उहाँले भीडलाई यसो पनि भन्नुभयो: “जब तिमीहरू आकाशको पश्‍चिमतिर बादल मडारिएको देख्छौ, तब तिमीहरू तुरुन्तै भन्छौ: ‘आँधी आउँदैछ,’ अनि ठीक त्यस्तै हुन्छ।
५५ जब तिमीहरू दक्षिणबाट बतास चलेको देख्छौ, तब तिमीहरू भन्छौ: ‘लू चल्नेछ,’ अनि त्यस्तै हुन्छ।
५६ ए कपटीहरू हो, तिमीहरू मौसम हेरेर त्यसको अर्थ लगाउन जान्छौ तर अहिले भइरहेको कुरा हेरेर त्यसको अर्थ लगाउन भने किन जान्दैनौ?
५७ कुन कुरा ठीक हो भनेर तिमीहरू आफै किन निर्णय गर्दैनौ?
५८ उदाहरणको लागि, तिम्रो वादीसित अदालतको हाकिमकहाँ जाँदै गर्दा बाटोमा छँदै मिलाप गर्ने कोसिस गरिहाल नत्रता तिनले तिमीलाई न्यायाधीशसामु उभ्याउनेछन्‌ अनि न्यायाधीशले अफिसरको जिम्मा लगाउनेछन्‌ र अफिसरले तिमीलाई झ्यालखानामा जाकिदिनेछन्‌।
५९ म तिमीलाई भन्छु, तिमीले पाई-पाई* चुक्ता नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा त्यहाँबाट छुट्‌न पाउनेछैनौ।”
^ यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।
^ शाब्दिक, “दुई असारियन।” एक असारियन बराबर एक दिनको ज्यालाको १/१६ भाग हुन्छ।
^ मत्ती १४:२५ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ शाब्दिक, “लेप्टन।” यसको मोल असाध्यै थोरै हुन्थ्यो।